Apple gbanwere atụmatụ iji melite Apple Maps | Esi m mac
Apple gbanwere atụmatụ iji melite Apple Maps
Eleghi anya n'ime awa ole na ole anyị ga-amata ozi ọma Apple kwadebere maka ngwanrọ ya na ọnwa ndị na-abịanụ. Kpọmkwem na m si Mac, anyị ga-eme nyocha zuru oke banyere Mac OS 10.13 ọhụrụ ma ọ bụ aha ụmụ okorobịa si Cupertino kwadebere maka sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ha. Agbanyeghị, Apple na-arụ ọrụ mgbe niile na ọrụ ndị na-emejuputa ma melite sistemụ arụmọrụ anyị. Otu n'ime ọrụ ndị a bụ Apple Maps na ụlọ ọrụ ahụ na-atụle ịgbanwe atụmatụ mmepe ya na-aga n'ihu.
Dị ka akụkọ sitere na iGeneration, Apple na-ezube inwe ndị mmekọ n'èzí, onye Mgbe ha debanyere aha na mmemme ahụ, a na-akwụ ha obere ego oge ọ bụla ha doziri ma ọ bụ nyochaa otu isi ihe na map Apple. Ndị ọrụ a ga-enweta ego maka ozi ọ bụla ha kọọrọ Apple, nke ga-abụ ihe dị ka cents 54, yana ihe kachasị nke 600 kwa izu. Ngbanwe a na atụmatụ, nke ngwa ndị ọzọ jirila, na-enye ohere ikpuchi mgbanwe ọ bụla n'ụwa.
N'ezie ndị Apple ga-enweta otu mpaghara na ebe nyocha. Na eserese ndị a, anyị nwere ike ịhụ nseta ihuenyo nke mmekọrịta onye ọrụ.
A katọrọ map Apple ebe ọ bụ na ebido ha na 2012. Maapụ nwere ọtụtụ njehie, ma na ọnọdụ yana na ọnọdụ igodo. Nkwubi okwu a ruru bụ na ọ bụghị ngwaahịa tosiri Apple. Ozugbo ekwesịrị ikwenye njehie ndị ahụ, Tim Cook rịọrọ mgbaghara maka obodo Apple, ọ nweghịkwa ihe ọzọ ọ ga-eme ma ọ bụghị ịhapụ onye kpatara ya, Scott Forstall.
Kemgbe ahụ, mmalite ya agbagola mana ọ naghị agbanwe agbanwe. Na United States, e mepụtara map ka ndị nke ọzọ. Otu ihe ahụ na-eme na mba ndị etiti na ugwu Europe. Ọ bụ eziokwu na ahịa Apple na mba ụfọdụ dị elu karịa, yabụ na mmepe ya ziri ezi. N'aka nke ọzọ, n'aka nke ọzọ, na ndị ọzọ onye kachasị ya na ya na-aga n'ihu na-enwe uru.
Nke a Apple atụmatụ ga-oru ozugbo, na-enwe olileanya inweta nsonaazụ n'oge na-adịghị anya. Site na ozi data Apple nwere ike iru, ọbụlagodi Google, ebe ọ bụ na n'akụkụ ụfọdụ ọkwa nke maapụ Apple dị mma karịa ndị Google nwetara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple gbanwere atụmatụ iji melite Apple Maps
Ngwa ngwa TV dị ugbu a na mba ndị ọzọ elekere tupu WWDC